नेपालमा पटक–पटक किन निम्तिन्छ अस्थिरता? विभिन्न आन्दोलनका कारण व्यवस्था र राज्यका संरचनाहरू परिवर्तन भएपनि राजनीतिकर्मीहरूको मनोवृत्तिमा खासै परिवर्तन आउन सकेको छैन। पञ्चायतीहुँदै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा पुगिसकेपनि राज्य र राजनीतिकर्मीहरूको कार्यशैलीमा विगतको भन्दा ज्यादै अन्तर देखिँदैन। यसकारणपनि नेपाली जनताले पटक–पटक अस्थिरताको सामना गर्नु परिरहेको छ। धैर्यकान्त दत्त
सत्ता समीकरणमा एक होलान् त तीन दल?
प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनासँगै बदलिएको राजनीतिक अवस्थामा राजनीतिक दलहरू नयाँ सरकार बनाउने कसरतमा जुटेका छन्।संसदको पुनःस्थापना र नेकपा नाम विवादसम्बन्धी फैसलासँगै राजनीतिक ‘कोर्स’ परिवर्तित भएपछि सत्तारुढबाहेक अन्य राजनीतिक दलहरू नयाँ सरकार गठनको कसरतमा जुटेका हुन्। धैर्यकान्त दत्त
सरकार बनाउन प्रचण्ड-माधवलाई सकस
तर, संवैधानिक अप्ठ्यारा सकिए पनि राजनैतिक जटिलता उत्पन्न भएको छ। खास गरेर सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को आन्तरिक किचलो र आफैंले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको निर्णयलाई सर्वोच्चले अस्वीकार गरिदिए पनि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पदबाट राजीनामा नदिँदा मुलुकले राजनीतिक निकास पाउन अझ सकस भइरहेको छ। आयोमेल संवाददाता
ओली सरकार सच्चिन्छ कि सच्चिँदैन?
प्रधानमन्त्री ओलीले पछिल्लो समय प्रतिगमनकारी शक्तिहरूको संविधान विरोधी र हिंसात्मक गतिविधि सह्य नहुने भन्दै सडकमा देखिएका व्यवस्था विरोधी गतिविधिबारे दलहरूको सुझाव मागेका थिए। उनले सर्वदलीय बैठकमा आएका सुझाव र आलोचनाहरूलाई मनन गरेर सरकार अघि बढ्ने प्रतिबद्धतासमेत जनाएका थिए। आयोमेल संवाददाता
कर्णाली विवाद, मन्त्रिपरिषद पुर्नगठनलगायतका विषयमा सुरू भएको अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ बीचको विवाद अहिले उत्कर्षमा पुगेको छ। आयोमेल संवाददाता
फागुनसम्म कोरोना नियन्त्रण भए पनि भिडभाड गर्ने अवस्था सिर्जना हुन नसक्ने उनले बताए। यस्तो बेला धेरै जना भिडभाड गरेर महाधिवेशन हुन नसक्ने उनले बताए। ‘त्यसैले महाधिवेशनको तरिका फेर्ने बारे सोच्नुपर्छ’, उनले भने, ‘क्षेत्र–क्षेत्रमा गएर चुनाव गर्ने विषयमा सोच्नुपर्छ।’ आयोमेल संवाददाता
जनताभन्दा कुर्सी र पदको मोह
निर्वाचनका बेला गाउँगाउँसम्म पुग्ने र परिवर्तनका सपना देखाउने तर, सत्तामा आएपछि आफ्नैबार सोच्ने नेपाली राजनीतिको संस्कार नै बनिसकेको छ। राजनीति सेवामूलक क्षेत्र हो। यहाँ परिवर्तनका लागि केवल त्याग हुन्छ, प्राप्तिका इच्छा हुन्छ त केवल समाज, व्यवस्था र जनताको स्तरको। आयोमेल संवाददाता
‘ओली जनताको त्रासमा खेल्न खोजे’
महामारी र आपतमा सरकार ढाल्ने खेलले देशलाई अस्थिर बनाउँछ भन्ने नारालाई नै प्रयोग गरेर प्रधानमन्त्रीले सत्ता टिकाइराखेको श्रेष्ठको भनाइ छ। आयोमेल संवाददाता
नेकपाको 'महाधिवेशन स्टन्ट'
त्यसपछि नेकपाभित्रका अरु मुद्दा किनारा लागे र अब विवादको मुद्दा बनेको छ- महाधिवेशन। यद्यपि पार्टिभित्र महाधिवेशन हुनुपर्छ भन्नेमा सबै सहमत छन्। तर ओलीले भनेजस्तै मंसिरमै महाधिवेशन कति सम्भव छ? नेकपाभित्र बहसको विषय अब यतातिर केन्द्रित हुन थालको छ- आयोमेल संवाददाता
सुरक्षित भएर चलाउँछौं– व्यवसायी, स्थिति भयावह हुनसक्छ – सरकार
विना सुरक्षा मापदण्ड यातायात सञ्चालन गर्दा कुन यात्रु कहाँकाट कतिबेला चढ्छन् ओर्लिन्छन् थाहा हुँदैन। हचुवाको भरमा सञ्चालन गरी जोखिम बढाउनु हुँदैन। अंगदबहादुर सिंह
एमसिसी र नागरिकता विधेयकमा कहाँ चुक्यो कांग्रेस नेतृत्व?
एमसिसी र नागरिकता विधेयक सवाल लिएर कांग्रेस निकै पछाडि परेको वास्तविकता सबैलाई मनन भएकै छ। तर, यी विषयका गलत प्रचार अन्त्य गर्न कांग्रेस अगाडि आउनैपर्छ। तर, वास्तविकता र सत्य स्थापित गर्ने अभियानमा कांग्रेस अग्रमोर्चामा रहनुपर्छ। अशाेक अधिकारी
महामारीका बेला व्यवहार किन ‘अस्वाभाविक’ हुन्छ?
‘दिनभरि बस्दा इन्जाइटी हुने, अनेक किसिमका सोच आउने, चिन्ता हुने भएकाले आफूलाई नियन्त्रण गर्न नसक्नेले रक्सी, चुरोट खाने, झगडा गर्ने गर्छन्,’ डा. कपिलदेव उपाध्यायले भने, ‘तर, यो कार्य गलत हो, आफ्नो स्वास्थ्यलाई हानी हुने काम गर्नै हुँदैन।’ आयोमेल संवाददाता
महामारी नियन्त्रणमा सरकारकाे काम कति प्रभावकारी?
सरकार र स्वास्थ्यमन्त्री असफल भइसके। एकै पटक संक्रमण बढ्यो। तर, त्यसलाई कसरी फेस गर्ने भन्ने कुरामा सरकारीको तयारी छैन। क्वारेन्टाइनमा मान्छे राखेको छ, परीक्षण गर्ने कीट नै छैन। यस्तो निर्लज्ज र दुरावस्था नेपालमा कहिल्यै थिएन। सरकारका मन्त्रीले कमाउने मात्रै होइन, जनतालाई सेवा गर्ने, बचाउनेतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्न प्रेरित गर्नुपर्छ। राज्यले दायित्वबोध गर्नपर्ने हो। तर, अहिले ग्याप देखिएको छ। अशाेक अधिकारी
दक्षिण एसियामा पनि यसको प्रभाव देखिन्छ। विश्व बैंकको प्रतिवेदनअनुसार यस क्षेत्रको कूल गार्हस्थ उत्पादनको आँकलन ६.३ प्रतिशतबाट घटेर १.८-२.८ प्रतिशतमा पुग्ने देखिन्छ। यो पछिल्लो चालीस वर्षको सबैभन्दा नराम्रो स्थिति हो। आयोमेल संवाददाता